कुनै पनि बेला पृथ्वीमा आउन सक्छन् एलियन, वैज्ञानिकले पाए रेडियो सिग्नल
के विश्वमा एलियनको अस्तित्व छ ? के एलियन दोस्रो ग्रहमा रहँदै आएका छन् ? यस्तो प्रश्नको जवाफ वैज्ञानिकदेखि आम मानिससम्म सबै जान्न चाहन्छन् ।
पछिल्लो केही दिनयता वैज्ञानिकलाई एलियनको सन्देश मिलिरहेको छ । यसबाट सावित हुन्छ कि पृथ्वीभन्दा बाहिर दोस्रो ग्रहमा पनि जीवन छ । यी सन्देशले एक नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । के वास्तवमा एलियन धर्तीमा आउन चाहन्छन् ?
५१ प्रकाश वर्ष टाढाबाट सिग्नल आइरहेको छ
अहिले वैज्ञानिकको एक इन्टरनेशनल टिमलाई एक ग्रहको निकै टाढाबाट रेडियो सिग्नल मिलिरहेको छ । यो ग्रह ताउ बुट्स नामको तारा प्रणालीमा अवस्थित छ ।
यो ग्रह पृथ्वीबाट ५१ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ । यसको सौर्य परिवार एक बाइनरी स्टार र एक एक्सोप्लानेट भएको वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
वैज्ञानिकको समूहलाई ज्याक टर्नरले नेतृत्व गरिरहेका छन् । टर्नर कार्नेल विश्वविद्यालयमा पोस्टडक्टोरल सोधकर्ता हुन् ।
उनको टिममा फिलिप जरका र जीन म्याथियस ग्रिसमीयर पनि छन् । एलियनमाथि गरिएको अध्ययन साइन्टिफिक जर्नल एस्ट्रोनोमी र एस्ट्रोफिजिक्समा प्रकाशित भएको छ ।
टर्नरले भने ‘यो सिग्नल ताउ बुट्स सिम्सबाट आइरहेको छ । यो सिग्नल ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्रको ताकत र ध्रुवीकरणका कारणबाट प्राप्त भइरहेको छ ।’
उनले अध्ययनमा एलियनको दुनियाँलाई लिएर कैयौं रहस्य बाहिर आएको बताए । यसका माध्यमबाट एलियनबारे अध्ययनको सम्भावना बढेर जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । लगातार सिग्नल आइरहेकाले एलियन हुनसक्ने सम्भावना प्रवल रहेको उनको भनाइ छ ।